ikhaya » imisebenzi » Yenjineli yoVavanyo lwe-1
Ukuvula uYobhi: Injineli yoVavanyo lweMveliso ye1
indawo: Yenjineli yoVavanyo lwe-1
inkampani: Northrop Grumman
Indawo: Lake City Salt UT US
Ubumi boMzantsi Afrika obufunekayo kule ndawo
Akukho ncedo lokuthutha olukhoyo
Amathuba akho okuphumelela ayinasiphelo kwiNkqubo zeNyakatho ze-Northrop Grumman.
Siyinxalenye yabafundi abatsha abagqibeleleyo kunye nabaqeqeshi abanolwazi, ukusebenzisana ukufezekisa iinjongo zethu. Kwiqela leCandelo leNkcubeko yeeNkcubeko uza kujoyina iingcali zethu ekuphuhliseni iinkqubo kunye nezisombululo ezigcina ihlabathi lethu likhuselekile. Sonke, sikhusela imikhosi yethu, ukhuseleko loluntu, ulwazi kunye nomhlaba wethu. Umsebenzi oyingqayizivele. Inzima kwaye inomvuzo. Kodwa uninzi lwawo wonke, ngumsebenzi owenza umehluko. Joyina nathi kwaye uqalise umsebenzi wakho. Siza kukuxhasa ngenkxaso, amaqela olwazi lwabasebenzi, kunye nombono wethu owabelwana ngawo wokhuseleko lwehlabathi.
I-Northrop Grumman ifuna i-Engine Tester 1. Esi sikhundla siya kufumaneka kwiCandelo leeNkqubo zoMsebenzi eSalt Lake City, eUtah.
Umfaki-sicelo ofanelekileyo uya kuba yinxalenye yeqela le-Test of Northrop Grumman. Umviwa okhethiweyo uya kusebenza kwi
indawo ejolise kuyo abantu apho uya kusebenzisana nabaphathi, amanye amasebe zobunjineli, kunye
lethu iqela lokukhiqiza.
Iimbopheleleko kunye noxanduva
Ukuvavanya kunye nesimo sengqungquthela yeekomiti zeekomiti zesekethe zombane, ezinokuquka ukuhlukumeza kunye nokwahlukana.
Oku kungabandakanya uluhlu olubanzi lweendibano zeekomiti zesekethe ezifana neDividential, Analog, Power Supplies, kunye neVidiyo
Yenza inkcazo yokujongana neengxaki zekhompyutheni ezivela kwi-teknoloji entsha ukuya kwi-20 + yobudala be-teknoloji.
Sebenzisa izixhobo zokusasazeka ngekhompyutha. I-DMM, i-Oscilloscopes, i-power supply, ii-generators, i-spectrum
abahlalutyi, iindlela zokuqokelela idatha.
Uhlalutyo loveliso lweemvavanyo kunye neendlela, kunye nophuhliso lwezicwangciso zophuculo lwezityalo.
Ukuphuhliswa kweendlela zokuhlola kunye neendlela ezizenzekelayo.
Ukuphononongwa kwezinto ezintsha zokuyila iindlela zokuvavanya kunye nokuhlolwa kovavanyo.
Ubungqina bezinto ezintsha zokuvavanya ukukhutshwa kwindawo yokuvelisa
Ukuzenzekelayo iinkqubo zokuvavanya nokwandisa ukusebenza
Funda kwaye uqonde izicwangciso, imidwebo, i-PL.
Ukubonelela ngeengcebiso kunye nokulungiswa kwezixhobo zokuvavanya ezintsha.
Umviwa, kungakhathaliseki ubudala kunye nokuqeshisa umthombo, kufuneka ahlangabezane NONKE imigaqo engezantsi. Umviwa kufuneka:
Ukugqiba okanye ukugqiba i-degree (Bachelor's, Master's, okanye PhD) kwiziko elivunyelwe; Akumele kubekho ngaphezu kwe-1 kunyaka ukuba idilesi sele ifunyenwe
Awunalo ulwazi lwezakhono zengcali kwintsimi yabo yokufunda (ngaphandle kwezifundo, ii-co-ops, okanye izifundo zophando)
Yiba ngundoqo kubunjineli bamandla okanye kwindawo enxulumene nayo
I-GPA epheleleyo ye-XPA ye-3.25 / 4.0 okanye ngaphezulu (iincwadi ezingabhaliweyo zezifundo kufuneka zinikezwe ngexesha lokufaka isicelo ngokulayisha amaxwebhu kwisicelo sakho okanye iphrofayili)
Yiba neGPA jikelele ye-GPA ye-3.70 / 4.0 okanye ngaphezulu
Amava oqeqesho lokuqala.
Amava kunye naluphi na oku kulandelayo: ICT, JTAG, Probe yeFlying, HALT, okanye ezinye iimvavanyo zokusebenza.
Unolwazi ngolwimi lwenkqubo
I-Northrop Grumman izimisele ukuqesha nokugcina abasebenzi abahlukahlukeneyo. Siziqhenyce ngokuba nguMlingani olinganayo / umSebenzi oQinisekisa uMsebenzi, ukwenza izigqibo ngaphandle kobuhlanga, umbala, inkolo, inkolelo, isondo, ulwabelana ngesondo, ubungqina besini, isimo somtshato, imvelaphi yesizwe, ubudala, isimo sobudala, ukukhubazeka okanye nayiphi na enye Iklasi e khuselwe. Ngxelo yethu epheleleyo ye-EEO / AA kunye ne-Pay Pay transparency, nceda u tyelele
. Ubumi boMzantsi Afrika bufuneka kwiindawo ezininzi.
SoftAtHome, MStar, iCES2017 Injini yeVidiyo	2017-09-03
Previous: Umphathi we-IT - iiHubs
next: Ukucwangcisa Uhambo lwenu kwiLu
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Unjineli weNzululwazi ye-1". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/electronics-test-engineer-1/. Enkosi.